4 “Basan+ anantwibere a mugu Samaria+ bepɔw so a musisi abrɛfo+ na mububu ahiafo, mo a moka kyerɛ mo wuranom sɛ, ‘Momfa mmra mma yɛnnom!’ no, muntie asɛm yi. 2 Awurade Tumfoɔ Yehowa de ne kronkronyɛ aka ntam+ sɛ, ‘“Hwɛ, nna bi bɛba a ɔde dade nkɔtɔkoro bɛtwe mo akɔ, na wɔn a wɔbɛka no nso ɔde nnarewa atwe wɔn.+ 3 Na mobɛfa ɔfasu mu ntokuru mu akɔ+ mo anim tẽẽ; na wɔbɛtow mo akyene Harmon,” Yehowa asɛm ni.’ 4 “‘Mommra Betel mmɛto mmara,+ na momma mo mmarato nnɔɔso wɔ Gilgal.+ Afei momfa mo afɔrebɔde mmra anɔpa, na da a ɛto so abiɛsa no, momfa ntotoso du du mmra.+ 5 O Israelfo, monhyew ade a akaw mfa mmɔ aseda afɔre,+ na mompae mu nka mo ayɛyɛde;+ mommɔ no dawuru, na saa na mopɛ,’+ Awurade Tumfoɔ Yehowa asɛm ni. 6 “‘Na me nso memaa mo sẽ so yɛɛ wosee+ wɔ mo nkurow nyinaa mu, na aduan ho yɛɛ nã wɔ mo atenae nyinaa;+ nanso moansan amma me nkyɛn,’+ Yehowa asɛm ni. 7 “‘Enti aka asram abiɛsa ma twabere adu no mamma osu antɔ amma mo;+ na memaa osu tɔɔ kurow biako mu, nanso mamma antɔ wɔ kurow foforo mu. Osu tɔ guu asase biako so, na asase a mamma osu antɔ angu so no so woe wosee.+ 8 Na nkurow abien anaa abiɛsa kyinkyin kɔnom nsu wɔ kurow biako mu,+ na wɔammee; nanso eyi nyinaa mu moansan amma me nkyɛn,’+ Yehowa asɛm ni. 9 “‘Mede ɔhyew baa mo so na memaa yare tew sii mo mfuw so.+ Moyeyɛɛ bobe nturo ne nturo foforo pii, nanso ɔsã wee mo borɔdɔma nnua ne mo ngo nnua nyinaa;+ nanso eyi nyinaa mu moansan amma me nkyɛn,’+ Yehowa asɛm ni. 10 “‘Na memaa owuyare a ɛte sɛ Egypt de no bi baa mo so.+ Mede nkrante kunkum mo mmerante+ na mefaa mo apɔnkɔ nnommum.+ Na memaa mo asoɛe bɔn kankaankan kɔɔ mo hwenem;+ nanso eyi nyinaa mu moansan amma me nkyɛn,’+ Yehowa asɛm ni. 11 “‘Medan mo butuwii sɛnea Onyankopɔn dan Sodom ne Gomora butuwii no.+ Na moyɛe sɛ dua a wɔahwim afi ogya mu;+ nanso eyi nyinaa mu moansan amma me nkyɛn,’+ Yehowa asɛm ni. 12 “Enti nea mede bɛyɛ wo ni, Israel. Na esiane sɛ eyi na mede bɛyɛ wo nti, siesie wo ho kohyia wo Nyankopɔn,+ Israel. 13 Hwɛ, nea ɔnwenee mmepɔw+ na ɔbɔɔ mframa,+ nea ɔka ne tirim asɛm kyerɛ ɔdesani,+ nea ɔma adekyee yɛ kusuu+ na otiatia asase so nkoko so no,+ Yehowa, asafo Nyankopɔn, ne ne din.”+